China Direct Steam Retort orinasa sy mpanamboatra | Dingtaisheng
Sakafo vonona hihinana, Porridge
Ny lalàna mifehy ny FDA sy ny sinoa dia nametraka fitsipika amin'ny antsipiriany momba ny famolavolana sy ny fiasan'ny setroka etona, ka na dia tsy manjakazaka amin'ny resaka fanjifana angovo aza izy ireo dia mbola tian'ny mpanjifa marobe noho ny fampiharana betsaka azy ireo amin'ny tranom-borona taloha. Amin'ny tanjon'ny fiantohana ny fanajana ny fenitry ny FDA sy USDA, DTS dia nanao fanatsarana marobe amin'ny resaka mandeha ho azy sy ny fitsitsiana angovo.
Fitsinjarana hafanana fanamiana:
Araho ny fanamarinana FDA / USDA:
Tsotra sy azo antoka:
Ampidiro ao anaty Retort ilay harona feno entana, akatona ny varavarana. Ny varavarana retort dia mihidy amin'ny alàlan'ny fifamatorana fiarovana telo mba hiantohana ny fiarovana. Mihidy mafy ny varavarana mandritra ny dingana rehetra.
Ny fizotran'ny fanamorana dia tanterahina ho azy araka ny fomba fahitan'ny mpanitsy fikirakirana mikraoba PLC.
Tany am-piandohana, ny etona dia nampidirina tao anaty sambo retort tamin'ny alàlan'ny fantsom-pamoahana etona, ary ny fandosiran'ny rivotra tamin'ny valves vent. Raha ny fotoana sy ny mari-pana miorina amin'ny fizotrany dia mifanentana miaraka, ny dingana mandroso ho avy-dingana. Amin'ny dingana rehetra miakatra sy sterilization dingana, retort sambo feno etona tototry tsy misy rivotra mijanona raha misy hafanana tsy mitovy. fizarana ary tsy ampy fanamafisana. Ny rà mandriaka dia tsy maintsy misokatra ho an'ny vent iray manontolo, dingana miakatra, fandrahoana sakafo mba hahafahan'ny etona mamorona fivalanana mba hiantohana ny fitovian'ny hafanana.
Zava-pisotro (proteinina legioma, dite, kafe): can tin
Legioma sy voankazo (holatra, legioma, tsaramaso): vifotsy
Hena, akoho amam-borona: vifotsy
Trondro, hazan-dranomasina: can tin
Sakafo an-jaza: can tin
Vonona ny hihinana sakafo, bubur: vifotsy
Sakafo biby fiompy: can tin
Previous: Rano fisitrihana rano
Manaraka: Steam & Air Retort
Auto Steam Batch mitsivalana Retort
Masinina Retort Steam